Moto C: Nkọwapụta na ọnụahịa leaked | Gam akporosis
Egosipụta Moto C
Motorola bụ akara ọzọ nwere afọ ọma. Firmlọ ọrụ ahụ amalitela ọtụtụ ngwaọrụ na-adọrọ mmasị n'ahịa. Ọzọkwa, mkpebi gị ịkụ nzọ Gam akporo igwe dị ọcha bụ ihe na-arụ ọrụ ihu ọma gị, ọkachasị mgbe a bịara n'ihe banyere mmelite. Ọnwa ole gara aga, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara ọbịbịa nke nso nke C.
N'ụbọchị ha, ha kwuru na ọ ga-abụ a ọgbọ nwere ọnụahịa dị ala na nkọwapụta dị mma. Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, anyị nwere ike ịmaworị ekwentị izizi nke a. Ọ gbasara Moto C. Na-ele anya na ekwentị nkọwa, anyị nwere ike ịhụ na Motorola ziri ezi.
Ọ bụ ekwentị nke kachasị zuru oke na ihe mgbaze. Ma nke ahụ ga-eju ya anya belata ọnụahịa. Ngwakọta dị mma na nke ọtụtụ ụdị chọrọ iji nweta. Ihe Motorola rụzuru na ngwaọrụ a. Kedu ihe anyị ga-atụ anya na Moto C a?
Ekwentị nwere a 5-anụ ọhịa ihuenyo na mkpebi nke 854 x 480 pikselụ. Ejiri polycarbonate mee ahụ ahụ nke ekwentị ahụ wee mee micro-textures azụ. N'ime, ekwentị ga-enwe a MediaTek MT6737M 4-isi nhazi. E wezụga inwe a Mali-T720 GPU.
The RAM na a Moto C nwere ike ịbụ ihe na-emechu ihu kacha. Ebe ọ bụ na ekwentị nwere 1 GB nke RAM. Ọ bụ ezie na usoro nchekwa anyị na-ahụ nsụgharị abụọ 8 na 16 GB. Ha abụọ gbasaa ruo 32 GB site na microSD. Na foto ngalaba ọ bụghị na ọ na-apụta nke ukwuu. Na igwefoto n'azụ sitere na 5 MP mgbe igwefoto dị n'ihu 2 MP.
La batrị nke Moto C bụ 2.350 mAh, ya mere, ịhụ nkọwa ya kwesịrị ịbụ ihe zuru oke iji nye ngwaọrụ nnwere onwe. Ngwaọrụ a ga-oru na ahịa na agba anọ (ọcha, gold, oji na uhie). N'ikpeazụ, dị ka sistemụ arụmọrụ ya Gam akporo 7.0. Nougat.
Na mgbakwunye na ụdịdị ahụ, ọnụahịa ekwentị ekpughere. Ọ bụrụ na nkọwapụta nke a Moto C juru gị anya, ọnụahịa ya ga-emekwa. Ngwaọrụ a ga - akụ ahịa ahụ ihe dị ka Euro 79. Kedu ihe ị chere maka ekwentị Motorola a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Egosipụta Moto C
Halloween nnukwu nkwalite, ruo 70% kwụsịrị na Lightinthebox
Google Pixel XL 2 nwere nsogbu na ụda mgbe ị na-edekọ vidiyo